Baaritaan la xiriira ‘cunto ka soomidda’ MUKHTAAR ROOBOW oo la dalbaday | Caasimada Online
Home Warar Baaritaan la xiriira ‘cunto ka soomidda’ MUKHTAAR ROOBOW oo la dalbaday
Baaritaan la xiriira ‘cunto ka soomidda’ MUKHTAAR ROOBOW oo la dalbaday
Baydhabo (Caasimada Online) – Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa looga baaqay in baaritaan uu ku sameeyaan xaaladda Sheekh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur, oo wararkii ugu dambeeyey ay sheegayaan inuu ka soomay cuntada.
Malaaq Cabdiraxmaan Malaas Shiino oo ka mid ah waxgaradka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in ay soo gaartay akhbaarta ku aadan in uu cuntadii ka soomay Abu Mansuur.
Waxa uu sheegay in maamulka Koonfur Galbeed Sooomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne Cabdicasiis Lafta-gareen looga baahan yahay in arrintaan uu u howlgalo, islamarkaana baaritaano ay ku sameeyaan xaaladda wadaadka.
Malaaqa ayaa sheegay in odayaasha Koonfur Galbeed ay la hadleen Lafta-gareen iyo guddoomiyaha baarlamanka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, islamarkaana Lafta-gareen uu u xil saaray guddoomiye Mursal.
Cunto ka soomidda Roobow ayaa waxaa labadii bishan Caasimada Online u sheegay xubno ka tirsan Xisbiga Amniga iyo Cadaaladda oo ee hoggaamiyo Abuu Mansuur.
Hoos ka dhageyso codka Malaaqa